#BlogIndiana: Jason Falls, Blogger uye vanamwari veGoogle | Martech Zone
#BlogIndiana: Jason Falls, Blogger uye vanamwari veGoogle
China, August 13, 2009 Muvhuro, Zvita 29, 2014 Douglas Karr
Kwaive kutanga kukuru nhasi ku Blog Indiana, uye Jason Falls akatanga majuzi achiyerera nekutamba pasi kukosha kwekutsvagisa injini, kuisa kusahadzika pamusoro pekupenga mweya, uye kutaura nevabloggi kuti zvakanaka kusateedzera mitemo. Chirevo chakakosha chaJason chaive chakadzama uye chakadzama… asi izvi ndizvo zvinhu zvakanamatira mune yangu kukambaira.
Anenge imwe yeshamwari dzangu aigona kuona maitiro angu… uye ini ndaive nawo piri chipoko vakagara kumashure kwangu saka ndine chokwadi chekuti ndinoziva zvavaifunga!
Ini ndinofunga mabloggi anofanirwa kutevedzera mitemo?
Ini ndinobvuma 100% naJason! Iko hakuna chero mitemo. Zvingaite saAlexander Graham Bell achiburitsa bhuku rekuti ungashandise sei nhare makore mashoma mushure mekunge avasika. Iyo blogosphere ichiri diki uye zvinoshanda kwauri zvinogona kusashandira vamwe. Vaverengi vangu vatoziva manzwiro andinoita nezvazvo pasocial media manyepo uye mirau inhema.
Hatina mitemo… izvo zvatiinazvo, zvakadaro, ndechimwe chiitiko nesvikiro uye kuziva zvinoshanda nezvisingashande kuitira kuti tikwanise kupfuudza ruzivo irworwo kune vamwe kuti vaedze.
Vanofanira Blogger Kuregeredza Kutsvaga?
Chris Baggott akapotsa abuda pachigaro chake apo Jason akakurudzira kusanetseka nezvekutsvaga. Akabvunza mubvunzo wakaenzana une muto, "Hausi kuitira vanhu zvisizvo nekusava nezvako zvemukati… zvemukati zvikuru… zvinowanikwa mukutsvaga?". Chokwadi Jason haana kufunga kudaro.
BTW: Iyi yakanga isiri gakava rese kunze - ingori hurukuro ine hutano yezve mabloggi maitirwo. Jason akaita basa rakanaka uye ainyatsojekesa kuti sei asingafanire kunetseka nezvekutsvaga. Mubvunzo waChris waive mumwe unonyatsokwidza poindi inoshanda, zvakadaro. Kana paine vanotsvaga kunze uko vanotsvaga iwe ... uye vasingakuwane, harisi iro dambudziko here?
Icho chinetso here kune injini dzekutsvaga? Kana kuti idambudziko rako here?
Mhinduro yangu ingave yekuti idambudziko rako. Google yanga ichinyanya kupa mukupa zvese zvishandiso zvinodiwa kuti vanhu vanzwisise maitiro ekugadzirisa zvese saiti yavo nezviri mukati. Google inototipa isu nematanho edu neshoko kana chirevo, uye nekutsvaga mavhoriyamu emazwi akataurwa - tichiziva kuti avo vanoda kukwikwidza mumujaho uyu vanofanirwa kugadzirisa.
Ndinovenga kutamba kune vanamwari veGoogle chero munhu. Ini ndinoshuva dai ndaigona kunyora zvinomanikidza zvemukati uye ndaisafanira kuve nehanya nekutaura mazwi akakosha, mazwi akafanana, uye musanganiswa wemakiyi mumukati mangu. Ini ndinoita, zvakadaro, kuitira kuti vanhu vatsvage mhinduro idzi vadziwane pane yangu blog! Uye uzviwane ivo vanozviita!
Izvo zvese nezve kugona! Social Media Explorer inoita zvakanaka here? Ehe saizvozvo. Jason anowana kubvunza uye kutaura zvibvumirano kubva kublog rake? Hungu, anodaro. Asi pane mukana wekuti Jason awane traffic yakawanda uye mibvunzo mitsva nekungogadzirisa zvemukati meblog rake. Ini handisi kukurudzira kutaura zvisiri izvo - kungoisa mamwe mazwi uye zvirevo uko ivo vaviri vane musoro uye vanokwezva traffic yekutsvaga. Zvakareruka blogging yeSEO.
Tarisa uone mablog edu anoita sei uye iwe uchaona yangu blog ine zvishoma zvishoma kusvika… asi Jason anonyanya kubatikana nyika mune yemagariro nharaunda nzvimbo. Iye muparidzi ane mukurumbira (ini ndichiri kudzidza) uye mutauri anonakidza. Iye zvakafanira kunyatsoteerera. Ini ndinofunga kushaya hanya nemukana kuri kukuvadza kugona kwake kweblog - uye iye haasi kubatsirwa nazvo kana.
ONA: Ndatumira Jason eBook yangu nyowani pasina muripo. Ndinovimba achachinja pfungwa. 🙂
Ghostblogging ibasa rakanaka
Inguvai yekupedzisira iwe mukuru wako paakakwidziridzwa pabasa ravo? Wakagara pasiri apo pavakasimudza manera? Kana kuti zvakakunetsa here zvishoma zvishoma zvawakabatsira kuzviisa ipapo? Ndozvinonzi Ghostblogger do. Ghostblogging harisi izwi rakasviba kana iro basa rakasviba, chinhu chinoshamisa. A great ghostblogger anoongorora kwayakaburitsa uye anonyora nemazvo zvakatumirwa ivo.
Ndinofunga ndine musoro mukuru kwazvo kuti ndiite izvozvo. Ini ndoda kiredhiti kiredhiti inofanirwa!
Inhema here? Zviri pachena here? Handitende kuti ndizvo! Kana ini ndikagara ndikaita bvunzurudzo newe uye ini ndikanyora mhinduro dzako dzese - asi ini ndakazvinyora zvese zvine mutsindo uye nenzira yekuvaraidza, zvinoita here kuti iwe usanyanya kuve munhu? Kune mamwe mazita makuru muBlogging nyika ayo asinganyore avo epamoyo zvinhu - ndinovenga kupaza nhau kwauri!
Chero bedzi fungidziro yeavo mablog mablog ari yako meseji, nei munhu angave nehanya kuti mumwe munhu ainyora? Waizviziva here izvozvo Kutaura kwaObama kwekutsaurira kwakanyorwa nemurume muchena ane makore makumi maviri neshanu mukomana kuStarbucks? Izvo zvinoshandura maonero ako naObama? Ndiye nyepera here? Izvo zvaive zvisiri pachena here?
Handifunge kudaro… Ndakafunga kuti kutaura kunoshamisa, uye handina mubvunzo kuti Obama aireva izwi roga roga raakataura!
Tags: mhedzisiro yebhizinesiemail kuchengetedzekakumakaKudya Kwekurairanharembozha yekuvakaReservations
Musika SaAmai Blogger
Chris Brogan Dombo BlogIndiana
Aug 14, 2009 pa 4: 35 AM
Kuwedzerwa kwakanaka kwehurukuro yehushamwari uye gakava rakakurudzirwa naJason Falls pa #blogindiana mangwanani ano. Conundrum yangu inoenderera mberi ndeyekuti ini ndichiri kubvumirana newe, Jason naChris. Ndinotenda kuti inodzokera pakutyora mitemo. Kana Jason asina hanya nekutsvaga uye izvo zviri kumushandira, ngazvive zvakadaro. Kana asina hanya kuti ndiani asiri kumuwana, kana kusiri kusakendenga kwakashata, ngazvive zvakadaro. Kana mamwe mablogiki, kusanganisira iwe, Chris, ini kana vatengi vangu vachida kushandisa simba rekubhuroga SEO, mutambo pa. Chengetedza nhaurirano ichiyerera, ndinoda kudzidza kubva muhurukuro uye avo vari kutora chikamu mairi.
Aug 14, 2009 pa 10: 29 AM
Doug, anonzwisisa uye akataura zvakanaka. Ndine chokwadi chekuti Jason achaona kukanganisa kwenzira dzake nekunyengetedza kune kufunga kwakadaro. Anogona kunge achifunga nezvemienzaniso yakaipisisa kana zvasvika pakubhuroga kweSEO uye ghostblogging. Pamwe taibvumirana naye. Zvakafanana nekuenzanisa inobudirira, inotsamwisa kana inovaraidza, yekutengesa terevhizheni neaya naPeter Francis iwe-unoziva-ndiani kana "kuisa zvakananga pahuma." Tinofanira kuva nekutengesa kwakachenjera.
Aug 14, 2009 na4:28 PM
Manotsi maviri ekare anokurumidza…apo Bell asina kunyora bhuku remashandisirwo enharembozha, chibvumirano chebvumirano chakaitwa pakati pekambani yake neWestern Union kuti isashandiswe parunhare. Ndizvo chete zvazvanga zvakanakira kusvikira Thomas Edison agadzira kabhoni bhatani transmitter (maikorofoni) yaiita kuti kutaura kure kure kushande. Uye tichitaura nezvehurukuro dzemutungamiri wenyika, Edison akadzidza zvishoma nezve kunyengedza pepanhau mushure mekutaurazve kutaura kweMutungamiri Andrew Johnson waGunyana 11, 1866 kutaura kweAssociated Press. Chero bedzi ghostbloggers vachiita kuti mukuru wavo ataridzike zviri nani pane zvavari chaizvo, mukuru haanyunyuti.
Aug 16, 2009 na6:46 PM
Taura nezve Information Overload! lol.
Ndakanakidzwa nekuverenga kweMutungamiri Andrew Johnson uye kazhinji aisakwanisa kurara achiramba achifunga nezvekwakanakira kugona kwake kutaura paruzhinji. TY Mike, handina kumbobvira ndakaisa mukana wekufunga kuti Thomas Alva ari kumashure kwekufungidzirwa kwaJohnson kwekutaura kwekutaura.
Kusvetukira mberi kuchidzidzo chanhasi; Hatifanire kufungidzira here vazhinji vese vanocherechedzwa vakaburitsa huwandu hwakanaka hwemeseji yavo yeruzhinji neimwe fashoni? Isu takaziviswa kuti ghostwriting yaivepo munguva yekutanga yeMutungamiri Johnson asi ndiani anoziva chaizvo pakaberekwa hunyanzvi.
Ini ndinokusiira iwe mubvunzo iwoyo nemubvunzo wangu pachangu…ndiani iye chaiye munyori weBhaibheri Hazviratidziki kwandiri kuti anga ari Mwari kana Jesu asi isu tinozvigamuchira se "Shoko raMwari." Avo vainyomba GHOSTWRITER"S IN THE SKY vaitove pabasa makore 2,000 XNUMX apfuura!
Ini handizorare nyore manheru ano sezvo ndatotanga kufunga kuti Karr anobhadhara ghostwriter's uye Mwari akabhadhara lol yake.
Aug 18, 2009 na1:04 PM
Pamwe ghostblogging ibasa rakanaka, asi munhu anoshandisa sevhisi yakadai haana kunaka zvachose. Zvirinani haana kutendeka kuvaverengi vake.
Aug 19, 2009 na8:00 PM
Great post Doug. Ndave nenguva refu ndichifunga nezvenyaya iyi. Muchokwadi ndakanyora chinyorwa rimwe zuva nezve hukama pakati pemagariro uye kukosha kwekutsvaga.
Ini ndanga ndisiri kublog Indiana, saka handina chimiro chereferensi yeiyi hurukuro. Ndinofunga kuti kutsvaga kuonekwa kwakakosha chaizvo. Pfungwa yangu ndeyekuti pane 3 yakakosha zvinhu mukuwana kuoneka kwekutsvaga, sekune chekuita nekubloga.
Yekutanga ndeyekugutsikana. Blog rangu parakasvika pamusoro pezvinyorwa zve100 ndakatanga kuhwina zvakawanda zvekutsvaga kwematemu akasiyana. Ini ndinongo fungidzira kuti ingani kutsvaga kwaungahwina neinodarika chiuru!
Yechipiri ndeyekugadzirisa mukati. Ini ndinofunga zvakakosha kuve nechokwadi chekuti URL yako permalinks, ma tag emusoro, ma tag emusoro, uye zvese zvirimo zvine mazwi ako akakosha kuitira kuti zvaunotumira zviwanikwe paGoogle. Ini ndinoona kuti izvi zviri nyore kuita kana iwe uchinzwisisa zvakakosha zvakakosha.
Chechitatu chinonyanya kukosha chinongedzo, uye ndinofanira kutenda kuti kuvaka mhando yako pamasocial media saiti ndeye FAR nzira iri nyore yekuita kuti vanhu vabatane newe.
Saka ndinobvumirana naJason? Hongu uye kwete.
Izvo hazvina musoro kwandiri kufuratira zvachose iyo yemukati optimization yesaiti yako. Sei usingade kuti Google ikuwane?!
Asi, ndinofunga kuti zvinopa pfungwa yakawanda kuisa simba rakawanda pakuvapo kwako kwevanhu, kuwana ruremekedzo kubva kune vamwe vanoblogi, kuwana chiremera kuburikidza nekubatanidza, iyo-iyo-nzira ichabatsira kutsvaga kwako kwekutsvaga munguva refu.
Chinonditsamwisa ndechekuti kana vanhu vakaita senge chikonzero chega chaunofanirwa kublogi kuhwina kutsvaga. Ini ndinongofanira kutenda kuti ZVAKAKOshera kuisa pfungwa inorema pane yako social strategy. Kana iwe ukabhuroga zvakanyanya uchishandisa ako makiyi mazwi unenge uchihwina akawanda ekutsvaga zvakadaro.
Zvino, Ghostblogging ibasa rakanaka here? Chokwadi! Zviri scalable? Kwete, kunze kwekunge iwe uri kutonga ghostblogging agency. Kana iwe uri blogger, unogona chete kuita basa rakawanda uye nekudaro unogona chete kuita mari yakawanda kudaro.